Wholesale Anywhere Tafura Tennis Sets ine Retractable Net Manufacture uye Fekitori |XGEAR
XGEAR chero kupi Ping Pong Equipment iri inosanganisira inodzoreredzwa net post, 2 ping pong paddles, 3 pcs mabhora, ese akachengetedzwa zvakachengeteka mune yekuwedzera drawstring bag, saka zviri nyore kutakura paunobuda.Iyi inotakurika tafura tennis seti inogona kubatika kune chero tafura yepamusoro.Ingotora navo uye ufare.
Mambure edu anogara kwenguva refu uye ari premium, mapaddles akasimba ane rabha inogadzika yakatarisana, mabhora haazotsemuka kana kuputika.Yakanakira nguva yekunakidzwa kuti iwe unogona kuve nemutambo wepakarepo wekunakidzwa kukuru zvisinei kumba, muhofisi, mukirasi uye rwendo rwekumisasa pasina dambudziko rekuisa pane chero tafura.
● PAKA PAKA RANDADZO:XGEAR tafura tennis set inouya yakakwana net retractable net post, 3 pcs ping pong (4mm muhupamhi) uye peya yemapadhi ane bhegi rekudhonza rekuchengetedza iyi ping pong seti zviri nyore, saka iwe unogona kugara uchichengeta zvese zvikamu pamwechete.
● Iyo mesh isingaremi yatinoshandisa mune retractable net post yakasimba, inogona kushingirira kune chero zvinokanganisa.Iyo inodzoreredzwa ping pong yakaiswa nekusundidzira kwechitubu chakavakirwa-mukati simbi, zviri nyore kusungirirwa kune chero tafura yepamusoro (hupamhi kusvika 75'' uye ukobvu i2'').
● Mapadhi anogadzirwa kubva muhuni hwakasimba hwakanamirwa zvakasimba ne premium rubber zviso, izvo zvinogona kupa kusimba kwakanakisa, zviri nani kumhanya uye spin control kana uchirova ping pong bhora nechiravha ichi.ABS tafura tennis mabhora haazotsemuka kana kupwanya kana achiatamba.
Feature Zviri nyore kuisa, inogona kuchengetedzwa zvinoshamisa pasina kukanganisa tafura.
Accessories list Kusanganisira retractable net post, 2 ping pong paddles, 3pcs mabhora (4mm dhayamita) uye rimwe bhegi.
Item Dimensions (mukati bhokisi saizi) L10.55" x W6.3" x H3.86"
Carton size L19.1" x W1.83" x H19.7" (15pcs/bhokisi)
CartonGros Weight 14.5KG
● 1. Our retractable net post iri nyore kuisa nechitubu chakavakirwa mukati.Ingosaidzira chinopfura, ipapo mambure anogona kusungirirwa zvakasimba.
● 2. Hazvina mhosva kuti chimiro chetafura chii, mambure edu anogona kuchengetedzwa zvinoshamisa pasina kukanganisa tafura yefurafura (Urefu hwemambure hunosvika 75", ukuru hwetafura hunosvika 2 ").
● 3. Tamba chero nguva, chero kupi, chero tafura!
XGEAR Tafura Tennis Set inotakurika nebhegi rekudhirowa rinosanganisira zvese zvekushandisa mu (inokwidziridzwa net post, 3 pcs bouncy ping pong, 2 paddles).Chero zviitiko zvinofadza zvinogona kugadzirwa pamwe chete nenhengo dzemhuri, shamwari, vaunodzidza navo, vatinoshanda navo kana kunyange vausingazive vakasangana nemukana.Kunyangwe iwe uri kumba, gym, kana parwendo, rwendo rwekumisasa, pikiniki, mukati kana kunze, isarudzo yakakosha kwauri.
Zvakapfuura: Deluxe Foldable Yakaderera Kumashure Boat Seat
Zvinotevera: Marine-Giredhi 600D 3 Bow Bimini Pamusoro Kavha mune Yakasiyana Size yeBoti